I-WOWOW 5 Cwangcisa iNtloko yoXinzelelo oluPhezulu oluPhathwayo, i-3.5 Inch Brush Nickel Shower Head ene-59 intshi
Ikhaya / Shower Imibhobho / Iintloko zeshawari eziphathwayo / WOWOW 5 Cwangcisa iNtloko yoXinzelelo oluPhezulu oluPhathwayo
【Design Contemporary】 Le ntloko yeshawari ephathwayo inebhalansi efanelekileyo kunye nobunzima esandleni, uyilo lwe-ergonomic lwenza ukuba intuthuzelo kunye nokusebenziseka kube lula. Ubuso bokutshiza obunobugcisa butyhila iifom ezilula, zokwakha ezihambelana neebhafu zangoku kunye nezincinci.
【5 Ukutshiza imisebenziHead Intloko yeshawari ineendlela ezintlanu zokutshiza, kubandakanya iMvula, ukuPhulula umntu ngamandla, Ukutshiza amandla emvula, Imvula + yokuPhulula umzimba, Imvula + Ukutshiza amandla. 5 Useto olwahlukeneyo lwenza ukuba uxinzelelo lube namandla kumava okugqibela kwanangaphantsi koxinzelelo. Kufanelekile ukuba uhlambe abantwana, uhlambe izilwanyana zasekhaya kunye nokucoca igumbi lokuhlambela, njl.
【Kulula ukucoceka kunye neAnti-block blockImilomo yokutshiza igubungela indawo epheleleyo yentloko yeshawa, i-40 eyi-self-Ukucoca imilomo yeerabha eguqukayo kunye nemilomo ye-ABS eyi-18, ezi jets zokucoca i-anti-clog rub-clean zokucoca ngokulula kunye nokuthintela ukwakhiwa kwekalika.
【Izinto zeNkulumbusoNick I-Nickel e-Brushed plated i-ABS yeshawari, ibracket kunye ne-PVC hose, eyenza ukuba yomelele, ubungqina bokuba ngumhlwa, ubungqina bokufiphala, iyayichasa iminwe kunye neendawo zamanzi. 360 ° isibiyeli esihlengahlengiswayo sokulungelelanisa ii-angles kunye nezikhokelo njengoko ufuna. Amantongomane ombhobho oqinileyo obhedu onxibelelwano oluthembekileyo oluvuzayo.
【Ukufakwa lula】 Akukho sidingo sokutsalela umntu ngemibhobho yamanzi, unxibelelanise nje ngesandla ngokuqinileyo kwimizuzu ngokulandela nje inyathelo ngenyathelo. Ukusebenza nayo yonke imigangatho yemibhobho ye-G1 / 2. Qaphela: Kuqhelekile ukuva ilizwi xa uligungqisa njengoko kukho impeller kwintloko yeshawari enceda ukuvelisa amanzi okuphulula ngcono.
I-SKU: H5010 iindidi: Iintloko zeshawari eziphathwayo, Shower Imibhobho